WTH! - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Warning!! Burma is not safe place to visit!!
Next: လွန်လေပြီးသော ချီးထုပ် အစိုးရ ပတ်စာခွါ ဖျာလိပ်ခြင်း »
Myanmar Blog » shweDarling » WTH!
Baby first, Marriage later By Aung La
credit to : “သမီးဆိုး”
Sexy Zune Thinzar
လူပါးတွေ ဝချက်ကွာ …
ထောင်ထဲမှာ နေရတဲ့ လူသတ်သမားတွေတဲ့ …
တွေးစရာတွေပေးနေတဲ့ လူသတ်ကောင်များနဲ့ မျိုးချစ်များရဲ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်းဓာတ်ပုံ
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တွင်ဆူပူရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်ပစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသူများနှင့်ဦးကိုနီအားလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သူများ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးထားမှုကုို Myanmar Muslim Media က ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သန်းကျော်ဝင်း အမည်ဖြင့်ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးက အဆိုပါဓာတ်ပုံကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မိနစ် ၃၀ ၀န်းကျင်ခန့် ဖေါ်ပြပြီးနောက်ပြန်လည်ဖျက်သိမ်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။
သာမန်ပြည်သူများ၊ သတင်းထောက်များ၊နှင့်အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းများပင်လျှင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်မရှိသည့် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း စုပေါင်းဘုံကထိန်ကျင်းပစဉ်တွင် ရိုက်ကူးထားသည်ဟု ယူဆရသည့် အထက်ပါဓာတ်ပုံတွင် ဦးကိုနီအားလုပ်ကြံသည့် အမှုတွဲများနှင့် မဘသ(ယခု ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်း)ထောက်ခံသူများသည် အေးဆေးရွင်လန်းစွာဖြင့် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံနေသည့် ဓာတ်ပုံက လုံခြုံရေးစည်းကျိုးပေါက်မှုတစ်ခုထက်ပိုသည့် သဘောတရားများပါဝင်နေကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတစ်ဦးကသုံးသပ်သည်။
အကျဉ်းဦးစီးဌာနထက်ပြည်ထဲရေးအပါအ၀င်တိုင်းပြည်မှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ တော်တော်လေးကို ပတ်သက်နေတယ်လုို့ ဒီဓာတ်ပုံက အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုနေတယ်လုို့ ရှု့မြင်သုံးသပ်တယ်”ဟု နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးထွန်းကြည်(နိုင်ကျဉ်း)က MMM သို့ပြောသည်။
တရားလွတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီအားလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ကြည်လင်းနှင့်ယင်းဖြစ်စဉ်အရဆက်စပ်တရားခံများအဖြစ်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရသည့် အောင်ဝင်းဇော်၊ အောင်ဝင်းထွန်း၊ နဂါးလေး နှင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဆူပူမှုတရားခံများဖြစ်သည့် ကိုလတ်၊တင်လင်းထိုက် (မျိုးချစ်သွေး ဓမ္မကွန် ယက် ဥက္ကဋ္ဌ) နှင့် တင် ဋ္ဌေးအောင်(ခ)အကြီးကောင်၊မြတ်ဘုန်းမိုရ်တို့သည် ပစ်မှုမကျူးလွန်မှီကတည်းက သိကျွမ်းသူများဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း ယခုဓာတ်ပုံက ဖေါ်ပြနေသည်ဟုလည်း ဦးထွန်းကြည်က ဆက်လက်သုံးသပ်သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းမှားပေးကာ မြယာကုန်းတွင် ဆူပူစေရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၆ လနှင့် ဒဏ်ငွေ ၅ သောင်း ချမှတ်ခံရသူလူပုဂ္ဂိုလ် ၅ ဦးအင်းစိန်ထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်နေ့တွင် ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌဆရာတော်ကြီး ကဌင်းတို့ကို ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ဘာသာ သာသနာနှင့် တုိုင်းပြည်ဂုဏ်ဆောင်သူများအဖြစ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
မြယာကုန်းတရားခံများကို ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိတဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌဆရာတော်ကြီးက နိုင်ငံသားကောင်းများအဖြစ်ဂုဏ်ပြုစဉ်
အဓိကတရားခံဟာသူပါပဲ။ ။ ( by – မင်း ဒင်)